Cabo Verde Airlines dia nanambara ny sidina faharoa ho any Boston
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Cabo Verde Airlines dia nanambara ny sidina faharoa ho any Boston
Seranam-piaramanidina Cabo Verde, ilay mpitatitra saina any amin'ny Repoblikan'i Cabo Verde, dia hanampy sidina faharoa eo anelanelan'ny Cabo Verde sy i Boston amin'ny volana desambra.
Manomboka amin'ny 14 Desambra, Cabo Verde Airlines dia hanomboka hanidina indroa isan-kerinandro mankany Boston, ny talata sy sabotsy. Ny talata, ny fifandraisana misy eo amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Amílcar Cabral (SID), ao amin'ny Nosy Sal, dia hiala amin'ny 10:00 maraina ora eo an-toerana, ary tonga ao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Logan amin'ny 14:10 PM. Ny sidina fiverenana dia hiala amin'i Boston amin'ny 15:40 ora eo an-toerana ary tonga ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Nelson Mandela (RAI), ao Praia, amin'ny 03:10 maraina ora eo an-toerana. Ny asabotsy dia hiala ao Praia amin'ny 03:00 maraina ny fiaramanidina ary tonga ao Boston amin'ny 07:10 ora eo an-toerana, ary hiverina any Sal Island, miainga ny BOS amin'ny 08:10 maraina, ary tonga ao amin'ny Nosy Sal amin'ny 19:40 PM.
Ny fifandraisana dia hatao amin'ny B757-200, miaraka amin'ny seza 22 ao amin'ny kilasy fampiononana, ary ny seza 161 amin'ny kilasy Economy.
Ny paikady vaovao dia natolotry ny Sabotsy 16 Novambra, nataon'i Mário Chaves, CEO lefitra ary Lehiben'ny Corporate Afairs ao amin'ny CVA, tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety notontosaina tao amin'ny Consulat Général de Cabo Verde any Boston.
Ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Boston Logan dia iray amin'ireo be mpampiasa indrindra any Etazonia, miaraka amina mpandeha 40.9 tapitrisa notanterahina tamin'ny taona 2018. Miaraka amin'ny fonenan'ny vondrom-piarahamonina midadasika any Cape Verdean, ny tanàna dia manana andraikitra lehibe amin'ny drafitra fanitarana stratejika Cabo Verde Airlines ho any Amerika Avaratra.
Manidina tsy tapaka avy any Boston mankany Praia (Cabo Verde) amin'izao alatsinainy izao, ny CVA dia te hampitombo ny anjarany amin'ny tsena ho an'ny Amerikanina mitsidika an'i Afrika ary koa ho an'ny Diaspora Afrikana any Etazonia.
Izy io dia azo atao amin'ny alàlan'ny foiben'ny CVA ao amin'ny Nosy Sal, izay misy ny sidina manidina mankany amin'ny toeran-kafa Cape Verdean ary koa ny tanàna afrikanina Andrefana, toa an'i Dakar sy Lagos, Nizeria, serivisy vaovao izay hanomboka amin'ny 9 Desambra miaraka amin'ny sidina dimy isan-kerinandro. Ny hub'ny CVA dia manolotra sidina mankany Lisbon (in-dimy isan-kerinandro), Milan (inefatra isan-kerinandro) Paris sy Roma (intelo isan-kerinandro), ary koa toeran-kaleha any Brezila.
Tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia efa nanambara ny orinasa fa hanomboka hanidina avy ao amin'ny Nosy Sal mankany Washington DC amin'ny volana desambra, intelo isan-kerinandro.
Mário Chaves, tale jeneraly lefitra ary Lehiben'ny raharaha Coporate, dia nilaza hoe: "Ny sidina faharoa mankany Boston dia namerina fifandraisana tena lehibe izay nihena tamin'ny alàlan'ny fanarenana ny CVA. Tena faly izahay hamerina ity fifandraisana ity any am-pielezana Cape Verdeans ary manantena izahay, miaraka amin'ity serivisy vaovao ity, fa afaka manohy mampitombo ny fizahantany ao Cabo Verde izahay ary manome ny Amerikanina ny fotoana hahafantarana bebe kokoa ny kolontsain'i Cabo Verde sy ny olony ”.
Ny 'bara oksizenina' dia fahatezerana rehetra ao New Delhi kenda be
Heathrow dia manonona sidina tsara indrindra SAS ao an-dakilasy amin'ny fampisehoana tabataba sy fandefasana entona